Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. #कोभिड–१९ – Janata Live
टेकुमा कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्रमाणीकरणमा भीड, विदेश जानेलाई सास्ती
काठमाडौं– सप्तरीका ४५ वर्षीय रामप्रित सदा र उनकै साथी अवस्थी सदाको शुक्रबार राती १० बजे साउदीको उडान छ । उठानअघि उनलाई जोन्सोनको खोप लगाउनु र खोप लगाएको प्रमाणपत्र तयारी गर्नुछ । यो काम लागि उनी दुई दिनअघि नै सीतहरीबाट काठमाडौं आएका हुन् । सदा बिहीबार दिभरि राजधानीका तीन वटा खोप केन्द्रमा पालैसँग लाइन बसे तर सबै ठाउँमा खोप लगाउन पाएनन् । कारण उनको साथी अवस्थी सदासहित तीन जना शुक्रराज सरुवा अस्पतालमा पुगे । टेकु पुग्दा पनि खोप लगाउने लाइन सकिएको थियो । उनीहरु तीनै जना यो अस्पतालमा दिउँसो भेटिएका थिए । खोप नपाएपछि उनीहरु दुवै काम स्थगित गरेर बसिरहेको गौशाला...
कोभिड-१९ ले यसरी बिगार्‍यो हाम्रो यौन जीवन
एजेन्सी– महामारी अघि धेरै दम्पतीहरू रातमा भेट हुने जहाजजस्ता थिए टेक्ससकी यौन थेरापिस्ट एमली जेमिया भन्छिन्। सुरुमा घर बाहिरका धेरै काम भएका दम्पतीका लागि महामारीले ल्याएको लकडाउन वरदानजस्तै भयो। घरमै बस्नुपर्दा त्यस्ता दम्पतीले लामो अन्तरङ्ग समय बिताउने मौका पाए। तर, महामारी बढ्दै जाँदा लकडाउनले दाम्पत्य सम्बन्धलाई असर गर्न थाल्यो। धेरै दम्पतीका लागि यौन चाहना ज्यादै कम भएर गयो, जेमिया भन्छिन्। विश्वभरि गरिएका अध्ययनहरूले त्यस्तै देखाउँछ। टर्की, इटली, भारत र अमेरिकामा सन् २०२० मा गरिएका अध्ययनहरूले लकडाउनका कारण मानिसको यौन चाहना र गतिविधि कम भएको देखाउँछन्। ‘यसको खास कारण चाहिँ धेरै मानिसलाई धेरै दबाव भएको हुनसक्छ,’ अमेरिकामा अध्ययन गरेका सामाजिक मनोवैज्ञानिक...
टोकियोमा सोमबारदेखि कोभिड–१९ आपतकाल हटाउने निर्णय
टोकियो – जापान सरकारले राजधानी टोकियो सहित नौ वटा प्रिफेक्चरमा आगामी सोमबारदेखि कोभिड–१९ आपतकाल हटाउने निर्णय गरेको छ। जापानको कोरोनाभाइरस सल्लाहकार समूहले आपतकाल हटाउन सिफारिस गरेसँगै सरकारले उक्त निर्णय लिएको हो। गत अप्रिल २५ देखि राजधानी टोकियो, ओसाका, क्योटो र ह्योगोमा आपतकाल लगाइएको थियो। यसअघि गत मे ११ मै आपतकाल हटाउने पूर्व निर्णय गरिए पनि दुई पटक आपतकाल बढाइएको थियो। नयाँ आपतकाल आइची, फुकुओका, होक्काइडो, ओकायामा, हिरोशिमा र ओकिनावा प्रिफेक्चरमा पनि विस्तार गरिएको थियो। सरकारको निर्णय बमोजिम आगामी जुन २० देखि ओकिनावा बाहेक अन्यत्रको आपतकाल अन्त्य हुनेछ। ओकिनामा भने कोभिड–१९ बाट संक्रमितको संख्या बढेको पाइएपछि आगामी जुलाई ११ सम्म आपतकाल...
उपत्यकाको निषेधाज्ञा आजदेखि खुकुलो
कोभिड–१९ सङ्क्रमण घट्न थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा आजदेखि लागू निषेधाज्ञालाई केही खुकुलो बनाइएको छ । तीन वटै जिल्लामा एकैसाथ लागू भएको निषेधाज्ञा असार ७ गते राति १२ बजेसम्मका कायम रहनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्ला काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका प्रजिअसहित जेठ ३० गते बसेको संयुक्त बैठकले निषेधको आदेशलाई खुकुलो बनाउँदै असार १ देखि ७ गतेसम्म थप्ने निर्णय गरेको थियो । थपिएको निषेधाज्ञामा भने अत्यावश्यक खाद्य सामग्री खरिद/बिक्रीका लागि बिहान ११ बजेसम्मको समय तोकिएको छ । यसअघि ९ बजेसम्मका लागि मात्रै खुला थियो । उक्त सामानको ढुवानी भने राति ९ बजेदेखि बिहान ११ बजेसम्म मात्र गर्न पाइने छ । पुस्तक पसल र...
कोरोनाको दोस्रो लहर पहिलो भन्दा एक सय प्रतिशत भन्दा बढी आक्रामक र घातक
काठमाडौं– कोभिड १९ को दोस्रो लहर पहिलोको तुलनामा एक सय प्रतिशतभन्दा बढी आक्रामक र घातक देखिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तथ्यांक हेर्दा कोभिडको पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रो लहरमा संक्रमित हुने १ सय १२ प्रतिशतले बढेका छन् । त्यस्तै, पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रो लहरमा मृत्यु हुने संख्या १ सय ६३ प्रतिशत बढी छ । नेपालमा कोभिडको पहिलो लहर झण्डै १५ महिना (२०७६ माघ १० देखि) चलेको थियो । दोस्रो लहर २०७७ चैत अन्तिम सातादेखि सुरु भएको मानिएको छ । नागरिक दैनिकबाट
कोरोनाभन्दा समुदायको डर, लुकीलुकी राति परीक्षण
सिन्धुली- सिन्धुलीको दुधौली नगरपालिकाका स्थानीय कोभिड–१९ को लक्षण देखिएपनि परीक्षण गर्न राति स्वास्थ्य संस्था धाउने गरेका छन्। संक्रमणको आशंका भएकाहरू रातको समयमा मात्र स्वास्थ्य संस्था जाने गरेका हुन्। समुदायमा कोरोनाको सङ्क्रमण फैलिरहेको छ। सङ्क्रमणका लक्षण देखिए पनि परीक्षण गर्न नआउँदा सङ्क्रमित थपिँदै र सङ्क्रमण फैलँदै गएको छ। सङ्क्रमण भएका व्यक्ति र संक्रमणको आशंका भएकालाई रोगको भन्दा समुदायको डर छ। सङ्क्रमणका लक्षण देखिए पनि पिसिआर परीक्षण नगरी घरमै बस्दा सङ्क्रमणको स्थिति झन् भयावह हुनसक्ने सिर्थौली कोभिड–१९ अस्पतालका इन्चार्ज डा धिरेन्द्रकुमार सुदा बताउँछन्। 'दिउँसो सुनसान हुन्छ। यहाँ रात परेपछि ‘कोरोना परीक्षण गर्नु परो’ भन्दै धेरै आउनुहुन्छ, हामी परीक्षणका लागि स्वाब सङ्कलन गरेर...
कालो ढुसी (म्यूकरमाइकोसिस) सम्बन्धी जान्नै पर्ने कुरा, कस्ता व्यक्तिमा बढी जोखिम?
कोभिड–१९ भएका बिरामीमा आँखा, नाक र अनुहार बिगार्ने कालो ढुसीको संक्रमण नेपालमा अहिले केही मानिसमा पुष्टि भएको छ। यो संक्रमण विरलै देखिन्छ तर संक्रमण गम्भीर भए प्राणघातक पनि हुनसक्ने भएकोले समयमा नै ध्यान पुर्‍याउनु आवश्यक छ। तर कालो ढुसी कोरोना संक्रमणजस्तो एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा भने सर्दैन। कालो ढुसीका सामान्य प्रारम्भिक लक्षणहरू – अनुहार, मुख, नाक, आँखा वरिपरि दुख्ने। – ज्वरो आउने। – आँखा र नाक सुन्निने, रातो हुने वा दुख्ने। – आँखाको ढकनी सुनिने र ढकनी झुक्ने, आँखाले धमिलो देख्ने। – नाकबाट रगत बग्ने, बाक्लो सिँगान आउने। – दाँत दुख्ने वा हल्लिने। कस्ता व्यक्तिमा बढी जोखिम? – ४५ देखि...
उज्जवल थापालाई उपचार हुँदै, भ्रमको पछि नलाग्न आग्रह
काठमाडौँ – विवेकशील साझा पार्टीका पूर्व अध्यक्ष उज्जवल थापालाई उपचार भइरहेको छ । इक्मो प्रविधिबाट उपचार भइरहेको भएपनि स्वास्थ्यमा भने सुधार नआएकाे मेडिसिटी अस्पतालले बताएकाे छ । थापाकाे स्वास्थ्यकाे बारेमा आएका भ्रमको पछि नलाग्न अस्पतालले आग्रह गरेका छ । थप समाचार पनि पढ्नुहोस् सङ्क्रमणमा कमी आएपछि कोभिड–१९ विशेष अस्पतालमा घटे बिरामी काठमाडौँ – कोभिड–१९ को सङ्क्रमण दरमा केही कमी आएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले तत्काल अक्सिजनसहितको उपचार कक्ष थप सञ्चालन नगर्ने जनाएको छ । अहिले स्वास्थ्य उपकरणसहित सञ्चालनमा आएका अस्पतालहरुमा पनि २० प्रतिशत मात्र कोरोनाका बिरामी रहेकाले कामपाले तत्काल थप उपचार कक्षको आवश्कता नरहेको जनाएको हो । दोस्रो लहरको कोरोना सङ्क्रमण...
दिल्लीमा २४ घण्टाभित्र सङ्क्रमितको मृत्यु सङ्ख्या १०० भन्दा कम
नयाँ दिल्ली । भारतको राजधानीसमेत रहेको दिल्ली राज्यमा एक दिनमा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या अप्रिल १३ पछि पहिलो पटक १०० भन्दा कम रेकर्ड भएको राज्य सरकारद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्कमा बताइएको छ। यो अवधिमा दिल्लीमा ९४६ व्यक्ति कोभिड–१९ सङ्क्रमित भएका छन् भने ७८ सङ्क्रमितको मृत्यु भएको छ। भारतको राष्ट्रिय राजधानी नयाँ दिल्ली र आसपासका क्षेत्रमा समग्र भारतमा जस्तै सङ्क्रमण दरमा निकै कमी आएको बताइएको छ। दिल्लीमा आइतबार निको हुनेको सङ्ख्या एक हजार ८०३ कायम भएको छ। दिल्लीमा सङ्क्रमण दर १।२५ कायम भएको छ। दिल्लीमा अहिलेसम्म कूल एक करोड ९२ लाख ३७ हजार ४० व्यक्तिको कोभिड–१९ परीक्षण भएको छ भने विगत २४ घण्टामा ७५...